Huawei P9 wuxuu lahaan doonaa ilaa afar doorsoome | Androidsis
Cristina Torres sawir-haye | | Huawei
Wax badan ayaa ka dusaya astaamaha farsamo ee suurtogalka ah ee Huawei P9. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka ugu dambeeya ee nooga yimaada Aasiya waxaa loola jeedaa bandhigyo kala duwan oo isla saldhiga terminal lagu tusi doono suuqa. Fikraddu waa sidii had iyo jeer loo dabooli lahaa nookyada kala duwan loona waafajin lahaa fursadaha dhaqaale ee jeebabka mid kasta oo ka mid ah macaamiisha. Sida laga soo xigtay macluumaadkan, waxaan si dhakhso leh u heli doonnaa ilaa afar doorsoome oo ah nooca Huawei P9.
Kuwa waxoogaa lumay, waxaan faallo ka bixiyaa magacyada koodhka ee horey u helay shahaadooyinka u dhigma ee marin u helka suuqa: EAV-AL10, EAV-AL00, VNS-AL00 iyo VNS-CL00. Laakiin kuwani wali waa taxane taxane ah oo aan la shaacin karin oo aysan macquul aheyn in taleefan la iibiyo maxaa yeelay cidna ma ogaan karto sida loo dalbado. Taasi waa sababta aan sidoo kale uga faalloonno xayaysiisyada. Mid kasta oo ka mid ah noocyadii hore wuxuu u dhigmaa kan Asalka Huawei P9, oo leh P9 Lite, P9 Max iyo P9 Pro.
Noocyada waxaa ku jiri doona qaababka ay wadaagaan moodooyinka kala duwan ee Huawei P9 iyo asalka. Sidaa darteed, waxay umuuqataa in shaashadda Full HD ee ka bilaabmi doonta 5,2 inji ay noqon doonto mid ka mid ah, iyada oo terminaalku u socdo qaab isla markaana dib u soo cusbooneysiinayo qaabka muuqaalka. Isla mar ahaantaana, dhammaantood waxay lahaan doonaan 955 / 2.3 GHz HiSilicon Kirin 2.5 processor iyo 4 GB oo RAM ah. Wali lama hubo haddii ay jiri doonaan noocyo RAM ah, in kastoo la rumeysan yahay inaysan ahayn.
Ma aha oo kaliya in shaqooyinkan ay wadaagaan dhammaan baaxadda Huawei P9, laakiin dareeraha hore ee 8MP ayaa sidoo kale caan ku noqon doona dhammaantood. Dhabarka waxaa jiri doona laba dareemayaal kala duwan si loo hagaajiyo tayada sawirada la helay. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu gaarayaa 12 Xildhibaan. Hadda waxaa haray oo kaliya in la arko natiijada kama dambaysta ah iyo qiimaheeda suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei P9 wuxuu lahaan doonaa ilaa afar doorsoomayaal